Tsvaga maguta akanakisa kumaodzanyemba kweFrance kushanyira | Bezzia
Misha iri kumaodzanyemba kweFrance yaunofanira kushanyira
Susana Garcia | 02/06/2021 10:00 | Lifestyle, famba
La nzvimbo yekumaodzanyemba kweFrance inowanikwa zvakanyanya kubva kuSpain, kunyanya kana iwe uchigara munzvimbo iyoyo padyo nemuganhu. Ndosaka iri nzvimbo yakashanyirwa zvikuru nevaSpanish vanotsvaga kutsvaga makona eFrance ayo vasati vaongorora. Munzvimbo iyi yekumaodzanyemba, sekuFrance yese, zvinokwanisika kuwana misha ine runako runoshamisa runogona kushanyirwa munguva pfupi.
Kunze kwemaguta, kushanyira mataundi madiki chinhu chakakura, nekuti vane kubata kwakasiyana, vanodzikama uye vane tsika. Mu vanhu vekumaodzanyemba kweFrance tinogona kuona kuti tsika dzavo dzakaita sei mumataundi anogashira simba ravo kubva kuSpain iri pedyo. Tiri kuenda kunoona zvimwe zvinonakidza kwazvo.
1 Carcassonne, medieval citadel
Carcassonne, medieval citadel
Panzvimbo yemuzinda maitove nemusha wevaRoma uye muzana ramakore rechina imba yekutanga yakavakwa. MaTrencavels ndiwo akavaka nhare huru yazvino, kunyangwe yakavakwa patsva nguva zhinji. About zana regumi nematatu kuvaka kwe chikamu chepazasi chinozivikanwa seBastida de San Luis. Iwe unogona kupinda zvakasununguka kuburikidza neNarbonne Gate, padhuze nepaki yemotokari, kuti uone mamaira enzira. Mukati mune shongwe, akati wandei masuo ekupinda, iyo Carcassonne Count Castle kana iyo Saint Nazaire Basilica.
Najac iri muDhipatimendi reAveyron, pakati pezvikomo zvakasvibirira munzvimbo ine makomo. Iri iguta rekuda kuziva rine meandering kuronga mumutsetse unokwidza chikomo, uko kunhare. Plaça del Barry ndiyo main square yayo uye inoshuvira kufamba uchidzika nemugwagwa chete unotungamira kunhare. Kubva kuimba yemauto pane zvakare makuru maonero epanoramic enharaunda.
Belcastel nderimwe remaguta muFrance ayo anotipa chaizvo izvo zvatiri kutsvaga. Iine zambuko rakanaka rebwe kubva muzana ramakore rechiXNUMX, dzimba dzematombo mune yakasarudzika nharaunda uye yakawanda runyararo. Iyo zvakare ine yeXNUMXth century dombo castle. Unogona kushanyira chikamu cheimba iyi, kunyange iine varidzi vega. Iyo yakanaka ndeyekufamba kuburikidza neguta wakadzikama uchiona makona ayo. Kune nzvimbo dzinoverengeka dzine masitepisi ekumbozorora munzvimbo yakadai.
Este guta riri paCamino de Santiago uye iri pakati penzvimbo dzakasvibira dzakasvibirira, saka iguta rinomiririra kunaka kwaro nenzvimbo yaro Iwe unogona kukwira kune yekuona kuti uone dhorobha reConques uyezve unofanirwa kufamba nemumigwagwa yayo kuti uone zvakasarudzika zvekuvakwa kwekumaruwa kwedzimba diki dombo. Yayo huru Romanesque abbey nePortico yeiyo yekupedzisira Mutongo inomira.
Ichi ndicho chimwe chei misha yakanaka yepakati nepakati munharaunda yeOccitania. Inowanikwa paCamino Frances de Santiago, saka inzvimbo yakazara vanhu. Mutaundi isu tinogona kuona akanaka mwenje mabwe epamberi mudzimba dzekare. Iyo bastide, taundi rinotambanuka kubva kune yakakura yepakati nzvimbo. Inogona kuonwa kubva kuPlaça des Cornieres, kubva panotangira migwagwa miviri. Iwe unogona zvakare kuona yakanaka kereke yeSan Bartolomé ine baroque altarpiece.
Musha unoshamisa uyu uri mudhipatimendi reDordogne, padyo neguta reSarlat. Icho chiri pamhenderekedzo yeRwizi Dordogne uye pamatombo ematombo. Idzo dzimba dzinotarisa mawere nenzira inoshamisa uye zvirokwazvo nzira yakanakisa yekuiona ndeyekutora rwendo rwechikepe parwizi. Mumusha unogona zvakare kuona iyo Marqueyssac magadheni, akanaka uye anochengetwa zvakanaka mapindu. Semumisha mizhinji, iyi zvakare ine nhare, iyo yeCastelnaud la Chapelle
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Misha iri kumaodzanyemba kweFrance yaunofanira kushanyira
Kuti murume angave anokwezva sei kumukadzi